Akkaataa ulaagaalee ifteesiteen tarreewwan filaman tartiiba qabsiisi. LibreOffice Ofumaan addabasuun hangiiwwan kuusaa deetaa fila.
Ofumaan hammangaa man'ee filatamanii gingilcha,itti aansuun sanduqawwan tarree tar-tokkee iddoo wantoota agasiisuu barbaaddee itti filachu dandeessuu uuma.
deetaa kee gingilchuuf ajajawwan agarsiisa.
Hangii kuusaa deetaa isaa Deetaa - Hangii hiiki. jelatti hiikame fila.
Gabateen qinxaa goolabaa guddaa deetaa kenna.Goolaba deetaa adda addaa ilaaluuf gabatee qinxaa kee sissireessuu dandeessa.
Man'ee ykn dhangii man'ee filameef deetaa gitaa'aa ta'ee hiiki.
Tarjaawwan filateef hundamtaa xiqqaahundamtaa xiqqaa herreega.Hammangaa moggafame keessatti LibreOfficen hundamtaa xiqqaa fii dabaltoo dunneetii ofumaan herreeguuf fankishinii SUM jedhamutti fayyadama.Akkasumas fankishinoota biraa shallaggif fayyadamuu ni dandeessa.LibreOffice n yommuu qareen naannawa kuusaa deetaa qindeessa irraa agarsiiftu LibreOffice n ofumaan addada isaan baasa.
Formulaa wal fakkaataa man'eewwan garagaraaif fayyadama, garuu ulaagaa gatiiwwan garagaraatin.
Barru gara Tarjaawwanitti
Garee fi Toorii
Cuqaasii tokkoon gareewwan babal'isuu fi qoncoorsuuf tooroo deetaa fi tarreewwan gurmeessi fi tarjaawwan walittii uumuu ni dandeessa.